Amazon Mudziyo Farm | Yechokwadi nguva mobile app kuyedza - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
AWS Chishandiso Chemapurazi
Newgenapps anofara kuzivisa kuwedzerwa kweKuyedzwa seSevhisi (TaaS) kune yedu mutsara wemasevhisi. Iye zvino ita shuwa kuti chirongwa chako chinoshanda zvakaringana kuzviuru zvezvishandiso zvakasiyana. Tinogona kukubatsira kunatsiridza mhando yeApple yako, Android, uye mawebhu kunyorera nekuvaedza vachipesana nema smartphones chaiwo nemahwendefa muAWS Cloud.
Nharembozha yekuyedza zvivakwa ndiyo imwe yezvipingamupinyi zvakakura panguva Yekushandisa Kwenhare Kwayedza. Nhare mbozha dzinodhura uye maEmulators anopa mashoma ekugona kugona. Amazon Chipurazi purazi inopa chaiyo nguva nharembozha app kuyedza kuzviuru zvemidziyo
AWS Mudziyo wepurazi ndiyo yakapusa AWS pamhepo chishandiso gore, iro rinopa vatengi nezvakakodzera maturusi ekureruka, anoshanda, uye nekukurumidza kuyedzwa kwemaitiro avo efoni. Iyo inogonesa kuenderera kusimudzira uye kuyedzwa pane chaiwo mafoni nhare. Yayo yakasarudzika debugging ficha yevagadziri veapp vanoratidzira zvingangodaro zvikanganiso izvo zvinonyanya kudzikisira mutengo uye nguva.
NeChirongwa Chekupima purazi, kudzikiswa kwenguva yekuburitsa inobvumira vatengi kutarisisa pazvinhu zvakagadziriswa pane kugadzirisa.
Shandisa kugona kwedu pakuyedza maapplication ako mune yega geography uye anotakura uchishandisa AWS Chishandiswa Chemunda. Ndiine ruzivo rwemakore masere mu kuvandudza kweApp uye tiri vashandi veAmazon, isu tine chivimbo chekupa mhinduro dzakanakisa pane zvaunoda.
Kuve isu vatambi veAWS, isu tinokwanisa kuwana zvese zvinyowani softwares uye mhinduro kubva kuAWS iyo vamwe vatengesi vangave vasina
Kuva mukati Mobile App kuvandudza kweanopfuura makore masere ikozvino, isu tinonzwisisa izvo zvido nezvinetso zvatarisana nazvo pakuyedzwa Mobile Apps
Kwayedza kuurayiwa nevashandi vedu veinjiniya bvunzo vane ruzivo. Yedu mainjiniya ekuyedza achangobva kuenda kuAWS Reinvent 2015 yakaitirwa kuLas Vegas uye vakapinda mudare bootcamp & akati wandei mamwe maekisheni ehunyanzvi eiyo Chipurazi
Yakaedzwa zvizere kuyedzwa. Sezvo zvaunoda zvichikura, tinokura newe. Kana zvichidikanwa, isu tinokwanisa kugovera yakazara yakakwenenzverwa bvunzo sevhisi, zvakare inowanikwa pane inodikanwa